जाने हाेइन त रोल्पाको जलजला । - Left Review Online
जाने हाेइन त रोल्पाको जलजला ।
नेकपाका नेता मणी थापा भन्नुहुन्छ - 'जलजला जनयुद्धकाे प्रतिक हाे, साैन्दर्य हाे, शान हाे । जनयुद्द बुझ्न चाहने हरकाेही एकपटक जलजला पुग्नैपर्छ ।'
Reporter २०७५ चैत २९ गते शुक्रवार
काठमाडौं, जलजला पहाडको नाम कतिले सुन्नुुभएको छ ? पक्कै धेरैले सुनेको हुनुपर्छ । जलजला पहाड रोल्पाको थवाङमा पर्दछ । तत्कालिन माओवादीले १० बर्षसम्म जनयुद्द सञ्चालन गर्दा जलजला एउटा सुरक्षित स्थल मानिन्थ्यो ।
रोल्पा र जलजला एकअर्काका परिपुरक नाम हुन् । जलजला र रोल्पा जनयुद्दमा सहभागी धेरै माओवादी नेता कार्यकर्ताको लागि एउटा आदर्श स्थल थिए । जसरी हिन्दुहरुले पशुपतिनाथ र मुश्लिमहरुले मक्का मदिनालाइ पबित्र तिर्थस्थल मान्दछन त्यसैगरी माओवादीहरु जलजला, रोल्पा र थवाङलाइ पवित्र ऐनान अर्थात आधारकिल्लाको रुपमा लिने गरेका थिए ।
तिम्रै निम्ति बरु यो ज्यान गए गैजाला ।
तिमीसँग गहिरो माया बस्यो जलजला ।
जलजला पहाड कति प्रिय थियो भन्ने कुरा यो गीतवाट पनि बुझ्न सकिन्छ । यो गीत जनयुद्दकी कलाकार चुनु गुरुंङले लेखेकी हुन् । बिडम्बना जलजलालाइ जोगाउँछु भन्ने उनी आफै तत्कालिन शाही नेपाली सेनावाट बच्न सकिनन् र महान शहीदमा दर्ज हुन पुगिन ।
नेकपाका नेता मणी थापा भन्नुहुन्छ – ‘जलजला जनयुद्धको प्रतिक हो, सौन्दर्य हो, शान हो । जनयुद्द बुझ्न चाहने हरकोही एकपटक जलजला पुग्नैपर्छ ।’ नेता थापाले पनि जलजलालाइ सम्बोधन गरेर गीत लेख्नुभएको छ । ‘भेटेर तिमीलाइ सोधुँ सोधुँ लाग्यो जलजला।’ यसैगरी जलजलाको नाममा धेरै कबिताहरु लेखिएका छन् । साहित्य कोरिएका छन् र फिल्म समेत बनेका छन् ।
क्रान्तिको प्रतिकको रुपमा बुझिने जलजला जाने होइन त घुम्न ? नेपाल सरकारले सन् २०२० लाइ नेपाल भ्रमण बर्ष घोषणा गरेको छ । अबको ९ महिनापछि शुरु हुन लागेको नेपाल भ्रमण बर्ष सफल बनाउन प्रधानमन्त्री स्वयंको अध्यक्षतामा एक समिती समेत बनाइएको छ । सय गन्तव्य स्थललाइ पर्यटकीय स्थल घोषणा गरिएको छ र जलजलाले सय मध्यको एक पर्यटकीय स्थलको स्थान लिन सफल भएको छ ।
यसरी जान सकिन्छ जलजला घुम्न
काठमाडौँको ‘लाइफ स्टाइल होलिडेज’ले रोल्पाको जलजला घुम्न जानको लागि आकर्षक प्याकेज तयार पारेको छ । सरकारले पहिचान गरेका एक सय पर्यटकीय गन्तब्यमा परेको ‘जलजला’को पर्यटन प्रबर्द्धनकालागि होलिडेजले ‘समृद्ध रोल्पा फाउन्डेसन’सँगको समन्वयमा १५ हजार रुपैयाँमा ४ रात पाँच दिनको प्याकेज सार्वजनिक गरेकाे छ ।
नयाँ बर्षकाे अबसर पारेर बैशाख २ गते एक टोली पहिलो पटक पर्यटकीय भ्रमणका लागि जलजला जाने जान लागेकाे छ । टोलीमा विभिन्न संचार माध्यमका पत्रकार तथा फोटोग्राफर सहभागी हुने आयाेजकले बताएकाे छ। प्याकेज अन्तर्गत पर्यटकलाई २ देखि ३ घण्टाको ट्रेकिङ, सांस्कृतिक नाचहरुको प्रदर्शनी र मनोरम ठाउँहरुको दृश्यावलोकन गराइने आयोजकले जनाएको छ ।
कति टाढा छ त जलजला
रोल्पा सदरमुकाम लिवाङबाट दुइ घण्टा सवारी साधनकाे यात्रा गरेपछि जेलवाङ पुगिन्छ । जेलवाङबाट दुइ घन्टाकाे पैदल यात्रामा जलजला पुगिन्छ । सडक मार्गबाट जलजला पुग्न थबाङ र जेलबाङ हुँदै यात्रा गर्नुपर्छ । जिल्लाकै अग्लो स्थानको जलजला थबाङ गाउँपालिकामा पर्छ ।
साबिक थबाङ, जेलबाङ, धबाङ, मिरुल र उवा गाविसको केन्द्रमा रहेको जलजलामा हिँउदका केही महिना हिउँ पर्दछ । तत्कालीन माओवादी लडाकुको उद्गम स्थल थबाङलाई युद्ध पर्यटनको अवधारणामा ढालेर पर्यटकीय गन्तब्यका रुपमा विकास गर्ने योजना अनुरुप थबाङको जलजलालाई पर्यटकहरुमाझ परिचित गराउन लागिएको लाइफ स्टाइल फाउण्डेसका कार्यकारी निर्देशक सुमित शाक्यकाे भनाइ छ ।
उक्त स्थानलाई द्वन्द्व अवधिभर तत्कालिन माओवादीले सुरक्षित तालिम केन्द्र बनाएका थिए ।व्यवसायीक रुपमा पर्यटन गन्तब्यको रुपमा विकास नभएपनि थबाङमा भने यसअघिनै घरबास अर्थात होमस्टे संचालनमा छन्, तर जलजलालाई पर्यटकीय गन्तब्यका रुपमा व्यवसायीक रुपले विकास गर्न लागिएको यो नै पहिलो पटक हो । कार्यकारी निर्देशक शाक्य अहिले लाइफस्टाइलले ल्याएको नयाँ प्याकेजले जलजलालाई व्यवसायीक पर्यटनमा प्रवेश गराउने विश्वास व्यक्त गर्छन ।
जलजलाकाे धार्मिक महत्व
युद्धकै परिवेशले जलजलालाई परिचित गराएको भएपनि जलजलाले धार्मिक महत्व समेत बोकेको छ । जलजला पहाडबीच खोंचमा रहेको वराह मन्दिरमा वैशाख, जेठ र साउने पूर्णिमाका दिन विशेष मेला लाग्ने गरेको छ । जलजलाको समथर क्षेत्रमा वराह मन्दिर छ । उक्त स्थानबाट करिब ५ सय मिटर दक्षिणमा भामापुप नामको आकर्षक गुफा छ । मन्दिर र गुफामा पुगेर पूजाआजा गरे नि : सन्तानलाई सन्तान प्राप्त हुने विश्वास रहिआएको छ ।
ऐतिहासिक महत्त्व रहेको जलजलाको पछिल्लोपटक पर्यटकीय विकास गर्न सरकारले चासो दिएको छ । यहाँ स्थानीय मगर रोका थरका मात्रै पुजारी हुन्छन् । पछिल्लोपटक जलजलालाई प्यूठानस्थित प्रसिद्ध धार्मिक गन्तव्यस्थल स्वर्गद्वारीपछिको गन्तव्य मानिन्छ । तर स्वर्गद्वारीमा भने बलि चढाइन्न । महाप्रभुले तपस्या गरेको स्वर्गद्वारीमा बर्सेनि हजारौं श्रद्धालु उपस्थित हुन्छन् । धार्मिक दृष्टिमा जलजला मातासँग ‘वर’ मागे पूरा हुने विश्वास छ ।
२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै यहाँको विकासमा सरकारले चासो दिएको हो । नेपाल पर्यटन बोर्डको सहयोगमा जलजलास्थित मन्दिर र धार्मिक संरचना झल्कने गरी निर्माण गरिएको छ । हाल मन्दिर र ताल निर्माण गरिएको जलजलाको जमिन अचम्मको छ ।
सिमखेत प्रकारको जमिनमा पाइला राख्दा थलथल गर्छ । श्रद्धालुले जमिनमा हिँड्दा कपासमा हिँडेजस्तो अनुभव गर्छन् । जलजलामा धूपी, बाँज, सेतो गुराँस, लालीगुराँस, भोजपत्र, लेकाली सल्लालगायत वनस्पति र जडीबुटी पाइन्छन् । यस्तै डाँफे, मुनाल, कालिज, बनेल, बाघ, भालु, घोरल, मृग, रातेलगायत पक्षी तथा जनावर पनि यहाँ भेटिन थालेका छन् । जलजलाबाट धौलागिरि र सिस्ने हिमाल शृङ्खला सजिलै र नजिकैबाट देख्न सकिन्छ ।
सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि सरकारले पर्यटन सम्बद्ध विभिन्न संघ संस्थासँगको सहकार्यमा पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गरिरहेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउनकालागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीकाे अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन समेत भइसकेको छ ।
भ्रमण वर्षको प्रचार प्रसारका लागि मात्र सरकारले ८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । यतिखेर सरकारका साथै पर्यटन सम्बद्ध संस्थाहरुले भ्रमण वर्षको प्रचार प्रसारलाई तिब्र बनाइरहेका छन् ।
Previous - स्ववियु निर्वाचन जेठ दोस्रो साता गर्न टियुकाे प्रस्ताव
Next - नापी र मालपोतमा भईरहेको बदमासी तत्काल रोक्नोस – मन्त्री अर्याल